Maxeey kawada hadleen Gud Jawaari iyo Safiirka Turkiga ? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxeey kawada hadleen Gud Jawaari iyo Safiirka Turkiga ?
muqdisho ( Mareeg News )Turkiga waxa ay ka baqdin qabaan hadii uu iscasilo gudoomiye jawaari in lakeeno nin mowqif jilacsan oo la shaqeeya itobia iyo imaaratka taasina ay keento in danihii turkiga ee somalia u qalqal galo .
Hadaba dowlada turkiga oo sheeda ka eegeysay maalmihii lasoo dhaafay xaaladan cakiran ayaa hada usoo jeesatay xalka waxa ayna dooneysaa in gudoomiye jawaari ay ku cadaadiso inuusan qaadan mowqifka itobia iyo imaaratka islamarkaana uusan is casilin.
Safiirka turkiga ayaa goordhaw lakulmay gudoomiye jawaari waxaaana ay ka wadasheekeysteen mustaqbalka dalka iyo sidii jawaari uu ugu adkeysan lahaa mowqifkiisa
Somali parliament speaker forms team to end political crises